Burundi oo war ka soo saaray Ciidanka ka jooga Soomaaliya | Baydhabo Online
Burundi oo war ka soo saaray Ciidanka ka jooga Soomaaliya
Xildhibaanada Baarlamaanka Dalka Burundi oo kulan ku yeeshay Magaalada Bujumbura ee Dalka Burundi ayaa waxa ay kulankooda kaga hadleen Ciidanka Howlgalka ujooga Soomaaliya ee AMISOM gaar ahaan Ciidanka Burundi.
Wasiirka Gaashaandhiga Burundi Emmanuel Ntahomvukiye iyo Taliyaha Booliska Alain Guillaume Bunyon ayay su’aalo ka weydiiyeen xildhibaanada xaalada ay ku sugan yihiin Ciidanka Burundi ee Howlgalka ujooga Soomaaliya.
Xildhibaanada Baarlamaanka Burundi ayaa waxa ay sheegeen Ciidanka Burundi ku dhowaad 10 Bilood in aysan qaadan Mushaarkii ay xaqa u lahaayeen, taasina aysan aheyn mid loo dulqaadan karo, waxaana ay xukuumada ka codsadeen in dib loo soo celiyo Ciidanka ka jooga Soomaaliya.
Waxa ay sheegeen arrintan in ay tahay mid aan loo dulqaadan karin, oo uusan jirin Dal aqbalaya in Ciidankiisa uu xuquuq la’aan ku shaqeeya.
Ugu dambeyntii Xildhibaanada Baarlamaanka Dalka Burundi ayaa Midowga Afrika ugu baaqay in ay bixiyaan Mushaaraadka ay xaq u leeyihiin Ciidanka AMISOM ee ka Howlgalla Soomaaliya, si ay uu sii socdaan Howlgalka Shabaab looga saarayo Soomaaliya.